Juventus iyo Paris Saint-Germain oo labaduba xiiseynaya saxiixa Sergio Ramos.
Home Horyaalka France Juventus iyo Paris Saint-Germain oo labaduba xiiseynaya saxiixa Sergio Ramos.
Juventus iyo Paris Saint-Germain ayaa lagu soo waramayaa inay labaduba isha ku hayaan dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee ku xeeran kabtanka Real Madrid Sergio Ramos .
Daafaca dhexe qandaraaskiisa haatan ee Bernabeu ayaa dhacaya xagaaga soo aadan, in kastoo si weyn loo aaminsan yahay inuu dhawaan saxiixi doono qandaraas cusub caasimada Spain.
Madrid ayaa lagu soo waramayaa inay warbixin ka soo saari doonto mustaqbalka 34 jirkaan Isniinta, halka Ramos sidoo kale la filayo inuu si cad uga hadlo xaalada inta uu gudanayo waajibaadka qaran.
Sida laga soo xigtay La Cuatro , labadaba Juve iyo PSG ayaa doonaya inay si xor ah kula soo saxiixdaan daafaca isla markaana ay si dhaw isha ugu hayn doonaan si ay u arkaan waxa lagu dhawaaqayo bilowga toddobaadka dambe.
Ramos ayaa qasaariyay labo rigoore intii lagu gudajiray ciyaartii Spain ay barbaraha 1-1 la gashay Switzerland ee UEFA Nations League habeenkii Sabtida laakiin wuxuu noqday ciyaaryahanka ugu safashada badan Yurub tartamada oo dhan isla tartankan.
Wiilkii hore ee Sevilla, oo sidoo kale la sheegay inay dooneyso Inter Miami , ayaa dhaliyay 100 gool 660 kulan oo uu u saftay Los Blancos tartamada oo dhan.
Wararka Kooban oo Xiiso leh
Previous articleJack Grealish oo noqday bartilmaameedka koowaad ee Manchester City
Next articleKooxda Liverpool oo ka fiirsaneysa in ay u dhaqaaqdo Kalidou Koulibaly